मनोरंजन – तहल्का खबर.कम
झापा / चर्चित गायक राजेश पायल राई र पेमा दिछेन तामाङको स्वरको नयाँ गीत सै हँमा सार्वजनिक भएको छ । गायिका पेमा दिछेन तामाङ ८ वर्षकी छिन् । द भोइस किड्सको टप १६ बाट बाहिरिएकी पेमा दार्जिलिङ निवासी हुन् । दार्जेलिङबाट भोइस किड्समा भाग लिन आएकी पेमाले राजेश पायल राईसँग सुमधुर डुएट गित गाएकी छिन् […]
झापा / नेपालको चर्चित रियालिटी सो ‘सारेगमप लिटल च्याम्प’ को टप ५ मा पर्न सफल कृपा पौडेललाई जिताउन झापामा अभियान चलेको छ । कृपा जिताउँ अभियानमा बिर्तामोड नगरपालिका वडानं. २ का अध्यक्ष नगेन्द्र संग्रौला संयोजक छन् ।यो अभियानमा २ सय ५० भन्दा बढी संघ/संस्थाको साथ र सपोर्ट रहेको नगेन्द्र संग्रोलाले बताए । विर्तामोड –२ चारपानेकी […]
दुर्गाप्रसाद कडरियाको ‘लोकल माया’ सार्वजनिक
झापा / गीतकार दुर्गाप्रसाद कडरियाको अर्को सांगितिक कोसेली ‘लोकल माया’ को म्यूजिक भिडियो आज सार्वजनिक भएको छ । गीतकार कडरियाले दुर्गाप्रसाद कडरिया नामको आफ्नो यूट्यूब च्यानलमार्फत गीतको भिडियो सार्वजनिक गरेका हुन् । गीतका रचना रिमाल र सुरेन चन्दले स्वर दिएका छन् भने संगीत सीएल शर्माले गरेका छन् । म्यूजिक भिडियोमा सुनिल क्षेत्री र गीता ढुङगाना […]
झापा / गायक बाबु मोक्तान र (बि.एल) र गायिका निता थापा मगरको आवाजमा रहेको गीत ‘ढोका फोरेर’ को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । प्रकाश सापकोटाको शव्द तथा जितेन लेप्चाको संगीतमा रहेको ‘ढोका फोरेर’को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको हो । भिडियोमा प्रेम भारती,एलिसा शर्मा,अस्मिता दाहाल,विशाल लामा,राज घलान, लक्ष्मी राना र पुण्य गौतमले अभिनय गरेका छन् […]
गीतकार दुर्गाप्रसाद कडरियाको ‘मुटुभित्र राख्छु तिमिलाई ‘ भिडियो सार्वजनिक
झापा / प्रेमिल भाव बोकेको मुटुभित्रै राख्छु तिमिलाई गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । नेपाल आइडल ३ का फस्ट रनरअप गायक प्रविण बेडवालको स्वर रहेको उक्त गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको हो । गाउँले परिवेशलाई समेटेर गीतको भिडियो निर्माण गएिको छ । भिडियोले गाउँले परिवेशको माया प्रेमलाई मार्मिक ढंगले पस्केको छ । भिडियोमा कलाकार […]
काठमाडौं / ‘उद्धव ठाकरे ! आज मेरो घर तोडियो, भोलि तेरो घमण्ड तोडिनेछ ।’ बलिउड नायिका कंगना रनौटले फिल्मी स्टाइलमा बोलेको यो ‘डाइलग’ भारतीय मिडियामा निकै चर्चित बनेको छ । महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री तथा हिन्दू कट्टरपन्थी शिवसेनाका प्रमुख उद्धव ठाकरेलाई उनले यसरी लल्कारेकी थिइन् । शिवसेना यस्तो अतिवादी पार्टी हो, जोसित प्राय बलिउडकर्मी थर्कमान हुन्छन् । […]
दुर्गाप्रसाद कडरियाको रचना र प्रविण बेडवालको आवाजमा ‘मुटुभित्र राख्छु तिमिलाई’
बिर्तामोड / गीतकार दुर्गाप्रसाद कडरियाले नेपाल आइडलका फस्ट रनरअफ प्रविण बेडवालको आवाजमा ‘मुटुभित्र राख्छु तिमीलाई’ बोलको गीत बजारमा ल्याउँदैछन् । झापाली गीतकार कडरियाले आफ्नो आठौँ सांगितिक कोसेलीको रुपमा यो गीत बजारमा ल्याउन लागेको जानकारी दिए । गीत राम्रो बनेकोले श्रोता तथा दर्शकले माया गर्नेमा आसावादी रहेको गीतकार कडरियाले बताए । गीतको म्यूजिक भिडियो सुटिङ भइसकेकोले […]